So Long Francis Chan
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ သီးခြားကော်မရှင် တခုကို သမ္မတက ဖွဲ့လိုက်ပါပြီ
During runaway from their homes 42 Rohingya people died due to sinked boat
Simple Knee Maintenance
'Tanda Putera' Itu 'Tanda UMNO Terdesak' - Aspan Alias
Data Entry Work Exposed
13 Eating Tips For Mighty Muscle Gains?
Malacca: Beautiful Roof – Just one beautiful photo of heritage shophouses' roof top. Lovely!
Posted: 17 Aug 2012 09:37 AM PDT
Malacca: Hing Loong Taiwanese Noodle @ Jalan Bachang – On my recent visit to Malacca, I have foundanice eatery outlet and that is this Hing Loong Taiwanese Noodle shop at Jalan Bachang. It was introduced byalocal Malaccan friend and he brought us here to try out. Malacca is always famous for Chicken Rice, Laksa, Cendol but this is something new to me.
Although it's new to me, it has more than 30 years of history in Malacca and serves Taiwanese style beef noodle, pork rib noodle, and more of Taiwanese-style noodle. It's something very special. Normally we only get to eat them in Taiwanese restaurant, but this one is located inalocal-style kopitiam (coffee shop).
It's famous for Beef Noodle, you can choose either soup base, or dry base. Since it's famous, I've orderedadry one and it looks and tastes good! I've never been to Taiwan but I've been toalot Taiwanese restaurant, I've got to say that this one is better. It's spicy, the beef is soft and tender, and the thick flat noodle is very springy. Yums. Best of all, it's only RM4.50, so much cheaper than those in Taiwanese restaurant in the mall.
Ignore the food presentation, it might not looks good, but it's nice.
Pork rib noodle @ RM4.20. A little soup withafew pieces of grilled pork rib. This one is notaspicy, the soup tastedabit sweet and salty. Nice too.
Zhajiangmian 炸酱面 @ RM4.20. Fried minced meat sauce noodles, didn't try this, so I can't comment on this.
Little Min tagged along with us, she's my friend, Jia Hui's cousin. Cute right? Very talkative.
Well, the lunch was simply awesome, but the portion seems to bealittle. You can order some side dish like beef soup, pork ribs and more to eat along. If there'sachance, I wanna come back for it again.
Posted: 17 Aug 2012 09:33 AM PDT
It was only this evening that I came across this article which I believe every Malaysian should read. Citizen Nades has rightly pointed out that some can't see the wood for the trees! Please leaveacomment to share your response. Thanks.
Show Us the Accounts
by Citizen Nades, The Sun Daily
In the meantime, there are many equations and variables that are being drawn in relation to medals and medal winners. Comparisons have been drawn showing the populations of participating countries and the number of medals won. There's alsoacomputation as to the number of medals to the size of the contingent.
Even more succinct is the amount of money the country spent in preparing the athletes against the medals won. Britain's 64 medals including 29 golds cost £4 million (RM20 million) apiece. Others have spent more while most have spent less. Judging by the British standards, our medals came at half their cost.
Malaysians have been told that the quest forafirst ever gold medal at the London Olympics did not materialise but National Sports Council (NSC) director-general Datuk Seri Zolkples Embong told reporters in London that it is "still deemedasuccess."
"As for winningagold medal, we did not succeed but it is notafailure because our medal haul equalled the Atlanta feat. The London Olympics also showed that we don't have to depend on badminton alone for medals," he said.
We will leave these remarks to be deciphered and interpreted by those in the know, but what we already know is that Zolkeples has admitted that the "Road to London 2012" programme withaRM20 million budget and aimed at winning the country's first ever gold medal in the Olympics, did not reach its objective.
So, the definition of the words – success and failure – gets blurred as we go along, and depending on who is saying it and who is analysing it, the variation could beamile.
What is more significant to taxpayers is that money, all RM20 million of it was used properly in the preparation of the athletes and not for junkets and holidays.
If the work of these officials is to "monitor" our athletes and distribute Malaysian flags and organise the support group, then it is money wasted. If they are on the sidelines to hug the players and steal the limelight from the coaches, then it is certainly not justified.
However, if they are there to give their expertise or offer advice to enhance the performance of the athletes, then this cannot be questioned.
There is nothing wrong with the taxpayer exercising his right to know how much was spent on each athlete and each of the various disciplines.
Let it be said that no one is grudging the money spent but what is asked for is some form of accountability. It's not just the Olympics that you notice the presence of officials but at other qualifying meets and major competitions.
Today, four years after the Brickendonbury debacle where grandiose plans foratraining centre had to be aborted, Malaysians are still in the dark as to how much was spent on travel and professional fees. Pushed for details, the answer has always been "sulit".
There is no such thing as confidential when it comes to accounting for people's money, unless of course it is spent on defence systems or procurements which may be ofasensitive nature.
Let's start the "Road to Rio" programme withafull blast from the past –acomplete set of expenditure and where the money went in the quest for gold in London. This will be rewarded withadeservedagold medal from the rakyat.
Posted: 17 Aug 2012 09:00 AM PDT
THE blind community lost a
true and dear friend last week.
Francis Chan – better known as
Chan Chen to his close friends – passed away on Monday in Kuala Lumpur. It
happened when he was takingashort afternoon rest.
Though the 64-year old's death
was peaceful and quick, the hearts and lives he touched throughout his life were
many and diverse.
No one probably recalls and
Posted: 17 Aug 2012 07:28 AM PDT
Posted: 17 Aug 2012 08:03 AM PDT
Program julung kali di Malaysia bermula jam 10.30 malam ini boleh diikuti melalui pautan http://www.youtube.com/user/anwarhangout/featured atau video selangorku di hujung artikel ini.
Nik Nazmi berkata, ahli dan pemimpin KEADILAN perlu memanfaatkan media sosial seperti facebook dan twitter secara optimum untuk berinteraksi dengan rakyat.
"Sebanyak 80 peratus pengundi muda termasuk luar bandar menggunakan media baru untuk berkomunikasi. Tapi, pertemuan dan dialog secara langsung bersama orang ramai juga sama penting.
Beliau berkata, acara #BorakAnwar di Google Hangout malam ini hanya permulaan yang bakal melibatkan lebih ramai pemimpin pada masa akan datang.
Selain berkomunikasi secara langsung dan interaktif dengan pemimpin KEADILAN, katanya, arkib dalam Youtube boleh dirujuk untuk mendapatkan maklumat tawaran dan dasar Pakatan Rakyat.
"Program ini anjuran Biro Komunikasi. Ia melibatkan lebih ramai peserta termasuk di luar negara," katanya.
Menurut penganjur, di bawah tema "Janji Demokrasi", mereka akan berhimpun di pancuran air di kawasan tersebut pada jam 10 malam pada hari tersebut.
"Tujuan utama kami berkumpul adalah untuk meraikan malam ambang kemerdekaan dengan semangat "Janji Demokrasi".
Posted: 17 Aug 2012 07:18 AM PDT
၈၈ မျိုးဆက်မှ ကိုမြအေးကို သိစေချင်တာကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆိုင်သော မောင်ဖြူ ၊ မောင်မည်း ဟူ၍ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာတွေဟာ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် အခုတော့ သူတစ်ပါး လူမျိုးရေး ကို မယ်မယ်ရရ မည်သည့် သမိုင်းကြောင်းမှ မသိ ဘဲနဲ့စော်ကား ပုတ်ခတ် ဝေဖန်တာတွေဟာ အလွန်ကြီးမား တဲ့ လူမျိုးရေး နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဟာ ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သိန်း ၄၀ ခန့်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ ကုလသမ္မဂရုံးမှာ မှတ်တမ်းတင် ထားပါတယ်။
အားလုံးဟာ မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ( ၁၂) သိန်းခန့်ရှိနေပြီး၊ ကျန်တဲ့သူတွေဟာ နိုင်ငံတကာ နယ်ပယ်တွေ မှာ လေလွင့်နေကြ တယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့ရဲ့မူလပေါက်ဖွားရာ ဒေသကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပါဘဲ။ ရိုဟင်ဂျာ တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ ရှည်လျားပြီး ကြမ်းတမ်း စေခဲ့တယ်။
အထူးသဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ကာလ အတွင်းနှင့် ဦးနေဝင်း အာဏာသိမ်း ပြီးနောက်ပိုင်း …..
ကာလများမှာ အလွန်ဆိုးရွားစွာခံစားခဲ့ကြပါတယ်။ တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်တွင် ၁၉၉၂ – ခုနှစ်မှ စပြီး (တစ်ရွာ နှင့် တစ်ရွာ) ခရီးသွားလာခွင့် ပ်ိတ်ပင်ခံထားရတယ်။ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်ကြောင့်ပညာသားပါပါ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး နှိပ်စက်နှိင်အောင် န.စ.က ခေါ် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးတပ်ကိုတရားဝင် အမြဲတမ်း ထားခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဟာ အာဏာမဲ့ ၊ ပါဝါမဲ့ တဲ့အပြင် စားစရာ တောင်မရှိချိုတဲ့နေတဲ့သူတွေပါ။ အားနည်း သူတွေပါ။ ဖိနှပ်ခံတွေပါ။ နဖားကြိုးတပ်ခံရ သူတွေပါ။ ရခိုင်တစ်ပြည်လုံးမှာ ဖြန့်ကျက်ပြီး ရှိနေသော်လည်း ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းများထဲတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရကြပါဘူး။ရခိုင် လူမျိုးတွေကသာလျှင် ၉၀ % ကျော်ယူထားပြီး ဗမာ ၁၀ % နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတာပါ။ မွတ်စလင်မ်ရဲ့ အိမ်မှာ တုတ်တစ်ချောင်း ထောင်ထားတာတွေ့ရင် ရခိုင်တွေက ဒီကုလားအိမ်မှာ လူသတ်လက်နက်ရှိတယ်ဆိုပြီး သွားတိုင်ကြတယ်။ မုတ်ဆိတ်နဲ့ ဆိုရင်တော့ အလ်ကိုင်ဒါ အကြမ်းဖက်ဆိုပြီးစွပ်စွဲကြတယ်။ သားသမီးတွေက ခိုးထွက်ပြီး နိင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွား လုပ် ပြီးမိဘတွေကို ထောက်ပံ့ရင်လည်း ငွေရောက်လာပြီး ၁နာရီ အတွင်းရောက်လာပြီးစစ်ဆေးတယ်။ အမျိုးမျိုးစွပ်စွဲပြောဆိုပြီး ငွေတစ်ဝက် ခွဲပေးရတယ်။ မဟုတ်ရင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပံ့ တယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုတာတွေဟာ မကြားချင်မှ အဆုံးပဲ။
ခင်ဗျားကတော့ သူတစ်ပါး လူမျိုးရေး ကိစ္စမှာ လာပြီး အာဏာရှင် ဆန်ဆန် (ရိုဟင်ဂျာ လုံးဝမရှိဘူး ဆိုတာပြောပြီဗျာ) ခင်ဗျားက ဘာမို့လို့လဲ။ ဗိုလ်နေဝင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့တပည့်လား၊ အမြော်အမြင် နည်းပါးတဲ့ နိုင်ငံရေး သမား ဆိုတာ အဲဒီစကား တစ်ခွန်းကသက်သေထူနေပါပြီ။ ခင်ဗျားသိထားဖို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထိ ၄၈ နှစ်တိုင်တိုင် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ပဲ။ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ သူငယ်တန်း ဖတ်စာအုပ် ကိုအရင် ကြည့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ လွပ်လပ်ရေး ရပြီးတာနဲ့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ၁၄ နှစ်တိုင်တိုင် ကြာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာပြောကြဆိုကြတာတွေ ၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်ခဲ့တာတွေ ၊ ပါလီမန် တက်ခွင့်ရပြီး ဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တာတွေ လေ့လာကြည့်ပါ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ မိန့်ခွန်း၊ ဦးဘဆွေ ရဲ့ မိန့်ခွန်း တွေအပြင် ဦးအောင်ကြီး ၊ ဦးတင်ဦးရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ ဆက်ကြည့်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာ အလံဟာ မြန်မာပြည် မှာ လွှင့်ထူခွင့် ရခဲ့တာတွေ တွေ့ရမှာပါ။ နောက်ပြီး နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီတဲ့ သမိုင်း ကြောင်းကို ပါလေ့လာပါအုံး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မှာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်စတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ ရှိနေတာကိုပါ ခင်ဗျားမသိဘူးဆိုရင် ခင်ဗျား ဘေးနားက တစ်ယောက် ယောက်ကို ဆရာတင်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ပါ။ အခုတော့ ခင်ဗျား လူတွင်ကျယ် လုပ်ပြီး ၊ သမိုင်းမသိဘဲ ပါတီရဲ့ထိုင်ခုံရာထူးအတွက် ပြောချင်သလို ပြောခဲ့လို့ ထောင်ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာ ခဲ့ရပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရောက်လာပြီး ကူညီနေကြရပြီ။ သတင်း တွေကလည်း သူတို့ပါးစပ်ထဲမှာ ပြောချင်သလိုပြောနေကြတယ်။ အဲဒီကိစ္စရော ခင်ဗျား ဘယ်လို ရှင်းမလဲ။ စဉ်းစားပါအုန်း . . . ဒီမိုကရေစီ စနစ် စတင်ကျင့်သုံးပြီး ( ၂ )နှစ်အတွင်းမှာ
သမ္မတ ကြီးရဲ့ နှုတ်မှ သော်လည်းကောင်း ၊ ပြည်သူ့အချစ်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နှုတ်မှသော် လည်း ကောင်း လုံးဝမပြောသေးတဲ့ ဒီစကားကို ခင်ဗျားက အာဏာရှင် ဆန်ဆန် ပြောဆိုခဲ့တယ်။ မြန်မာ မွတ်စလင်မ် ၁၀ ဦးဟာ ကျုပ်တို့ ပြည်နယ်ရဲ့ ဧည့်သည်တွေပါလို့ ပြောတာကစပြီး ရန်ဖြစ် စကားများ ခဲ့ရာကနေ ရခိုင်တွေက မွတ်စလင်မ်တွေကို ရှိသမျှ အာဏာပါဝါ ၊ မီဒီယာတွေကို စုစည်းပြီး ရှိသမျှ အင်အားအကုန်ထုတ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ နဂိုကတည်းက အာဏာ ပါဝါ မဲ့တဲ့အပြင် စားစရာ တောင်မရှိဘဲ စုစည်းမှု မရှိတဲ့အချိန် ၊ နဖားကြိုးတပ်ခံရတဲ့ အချိန် ၊ (တစ်ရွာ နှင့် တစ်ရွာ) ခရီးသွားလာခွင့် မရှိတဲ့ အချိန် မှာ အလစ်တိုက်ခံရတယ်။ မီဒီယာတွေက ဘက်လိုက်ပြီး သတင်းတွေပြောင်းပြန် အသံလွှင့် ခဲ့ကြတယ်။ မီးကို သူတို့ ရှို့ပြီး ၊ မွတ်စလင်မ်တွေက ရှို့တယ် ပြောလိုက် ၊ မွတ်စလင်မ်တွေက ကိုယ့် အိမ် ကို ၊ ကိုယ့်ဗလီကို ရှို့တယ်လို့ အသံလွှင့်လိုက် ၊ အင်အား နည်းပါးသူတွေကို အင်အားကြီးသူတွေ ကအနိုင်ကျင့်ခဲ့ ကြတယ်။ ပြီးရင် မြို့ပေါ်ကနေ တောကို ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်။ နိုင်ငံတော်ကလည်း ပထမ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေမို့ နားယောင်ပြီး ချက်ချင်းတပ်မကြီး တစ်ခုလုံး ၊ ရေတပ် ကြည်းတပ် အပြည့်နဲ့ မောင်းတောကို ပို့ပေးကြတယ်။ အဲဒီမှာ ရခိုင် လူမျိုးတွေ လုံခြုံသွားတော့ ၄င်းတို့ အင်အား များတဲ့ စစ်တွေမြို့မှာ ချို့တဲ့ တဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကိုအကွက်ချပြီးတိုက်ခိုက် ခဲ့ကြတယ်။ ရခိုင်တွေရဲ့ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇတ်တွေကြောင့် ဘီဘီစီ ၊ ဗွီအိုအေ ၊ အာရ်အဖ်အေ စတဲ့ အသံလွှင့်ဌာနတွေမှာ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ရခိုင်တွေဟာ သတင်းပြောင်းပြန် လွှင့်ပြီး အကွက်ကျကျ စီမံလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်မတန် လူမျိုးဘာသာ အစွန်းရောက် တဲ့သူတွေပါ။ ဒီအဓိကရုဏ်းကို ကြိုးကိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ ဝံသာနုရက္ခိတ အဖွဲ့၊ ရခိုင်သာဟာယ အဖွဲ့၊ရခိုင် လူငယ် ကွန်ရက် နှင့်ရခိုင်လူမျိုးတွေ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ မီဒီယာ တချို့ (အထူးသဖြင့် Eleven media group) အပြင်၊ အစိုးရ အရာရှိကြီးတွေ ထဲမှာ ပါတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ လည်း ပါပါတယ်(ပမာအားဖြင့် ဒု-တိုင်းမှုးအဆင့်ရှိတဲ့ရခိုင်တွေပေါ့ )။ ရခိုင်တွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဓါးရှည်တွေလိုမျိုး မွတ်စလင်မ်တွေမှဆီမှာ ၁ ချောင်းမှ မရှိပါဘူး။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အင်မတန် သနားစရာကောင်း ပါတယ်။ မယုံရင် ရခိုင်မှာ ၁ နှစ်လောက် သွားနေကြည့်ပါ။ ရခိုင်တွေက ခင်ဗျားကို ကြိုဆိုကြမှာပါ။ ရခိုင်မှာ ဂုဏ်သရေ ရှိတဲ့ ရခိုင်တွေလည်း အင်မတန် များပါတယ်။ သူတို့ ဘာပြောပြော မွတ်စလင်မ်တွေ သည်းခံကြပါတယ်။ ဒေသခံ ရခိုင်တွေကတော့ မျိုးရိုးကောင်း ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေကို အနိုင်ကျင့်တာ သူတို့မဟုတ် ဘူး။ တခြားဒေသက လာပြီးအခြေချ သူတွေပါ။ သူတို့တွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှာလည်း ၁၀သိန်း ခန့်ရှိ တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံဆိုတော့ အေးချမ်းတယ်။ သူတို့တွေက အဲဒီမှာ ကြီးပွား ချမ်းသာ ကြတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ သွားပြီးပညာသင်ကြားကြတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ တွေကို လွှမ်းမိုး နိုင်တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေက ဒုကသည် အဆင့်နဲ့ နေထိုင်ကြပြီး သူတို့တွေက နိုင်ငံသားအဆင့်ရှိကြတယ်လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ အတူနေရအုန်းမှာပါ။ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား လိုပေါ့။ ရခိုင်လူမျိုး တွေဂရုဏာသက်ရောက်တဲ့ တစ်နေ့ပေါ့ဗျာ ၊ နိုင်ငံတော်ကို မထိန်မဝှက်ပဲ တင်ပြနိုင်တဲ့တစ်နေ့ကြရင် အားလုံးနဂိုမူလ အတိုင်းကောင်းသွားမှာပါ။ အခုတော့ သူတို့က သတင်းတွေကို ဘက်လိုက်ပြီးလွှင့် နေကြတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နိုင်ငံတော်အဆင့်က ဦးတင်ဦး ၊ ဦးအောင်ကြီးတို့ ပြောခဲ့တ့ေဲ န့က စပြီး လက်နက် မကိုင်တော့တာ ယနေ့အထိပါပဲ။ အဲဒီ နိုင်ငံတော် ဂတိကို စောင့်မျှော်ရင်း ငတ်ပြတ်ပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခ ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆက်လက်ပြီးလည်းစောင့်မျှော်နေအုန်းမှာပါ။ မင်းမှာ သစ္စာ ၊ လူမှာ ဂတိ ဆိုသလို နိုင်ငံတော် ကို သစ္စာ ရှိစွာနဲ့ နိုင်ငံတော်က ပေးထားတဲ့ဂတိကို မျှော်လင့် စောင့်စားရင်း ဘဝပေါင်းများစွာကို စတေးခံနေကြတာပါ။ ၊ ပြည်သူ့ အချစ်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ သမာသမတ်ရှိပြီး ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်ထက်မြက် မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ မရှိရင် ဒီမိုကရေစီလည်းရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်တွေရဲ့ အခြေအနေ အမှန်အချို့ကို တင်ပြရမယ်ဆိုရင် လုံထိန်းရဲတွေက မွတ်စလင်မ် ရွာထဲကို ပထမ ဝင်လာပြီး ၊ ရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေက အနောက်က လိုက်လာတယ်။ မွတ်စလင်မ်တေကွ လုံထိန်းရှိတယ် ဆိုတော့ ထွက်မပြေးဘူး။ အနောက်က လိုက်လာတဲ့ ရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေကပိုပြီးနီးကပ်လာ လို့ ခုခံမယ်လုပ်တော့ လုံထိန်းတွေက ပစ်သတ်တယ်။ အဲဒီမှာ ရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေက ဓါးရှည်တွေနဲ့ လိုက်ခုတ်တယ်။ တစ်ချို့က မီးရှို့တယ်။ မီးပုံထဲမှာအလောင်းတွေရော မသေမရှင်တွေရော ပစ်ချ တယ်။ ပစည်းလည်း လုတယ် ၊ အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလည်း ကားနဲ့ တင်ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒါကိုကြည့်ခြင်း အားဖြင့် လုံထိန်းတွေက ရခိုင် အကြမ်းဖက်တွေကို ကူညီခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို ၃ ရက်အတွင်းမှာ လူ ၅၀၀ခန့် အသတ်ခံရပြီး အမျိုးသမီး နဲ့ ကလေး ၁၀၀ ကျော်ခန့် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ အနေနဲ့ ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် သင့်မြတ်အောင် ကြိုးစားပြီးနေထိုင်သင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
Posted: 17 Aug 2012 05:55 AM PDT
I wrote the comment after the first commission:
All are from Rakhine, Gov admin and military…nothing will come out and that was not an Independent commission.
My2cents' advice to the new Commission:
First to look at the autopsy report, rape or not. DNA? Sperm?Whether moved the dead body from other place to trap Muslims in order to use to startaRiot.
Investigate why Hmu Zaw wrote about Rocket Launchers ARMED Bengali Invaders.
Who are the instigators or masterminds behind?
What action taken on Police officers and Military Commander in Taunggope?
Look at the videos in Taunggope.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ သီးခြားကော်မရှင် တခုကို သမ္မတက ဖွဲ့လိုက်ပါပြီ တဲ့။
ဒီကော်မရှင်မှာ အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းက ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ ပါဝင်သလို ထူးခြားတာကတော့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုထဲက ပုဂ္ဂိုလ် အများအပြားရဲ့ အမည်တွေ ပါဝင်နေတာပါပဲ။
၂၀၁၂ မေလနှင့် ဇွန်လများတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များ၊ ပဋိပက္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်အမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် သီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၅၈/၂၀၁၂) ကို
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
သမိုင်းပညာရှင်၊ ညွှန်ချုပ်(အငြိမ်းစား) ဒေါက်တာမျိုးမြင့် ဥက္ကဌ ဖြစ်ပြီး
ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်းမှ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် ဦးကျော်ညွန့်၊
မြန်မာဘက်(ပ်)တစ်(စ်)ကွန်ဗင်းရှင်းမှ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် ဦးစောမာဂေကြီး၊
SNLD ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊
NDF ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဒေါက်တာ အေးမောင်၊
(၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ဦးကိုကိုကြီး၊
UMFCCI မှ ဒေါက်တာ ရင်ရင်နွယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဦးထွန်းအောင်ချိန်၊ အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ်မှ ဟာဂျီ ဦးညွန့်မောင်သျှိန်၊
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ်မှ ဟာဂျီ ဦးတင်မောင်သန်း၊
မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် မှ ဟာဂျီ ဦးလှဝင်း၊
မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် မှ ဦးကျော်ခင်၊
မြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များ(ဘာသာရေး)အဖွဲ့ချုပ်မှ ဟာဂျီ ဦးမြင့်ထွန်း၊
မြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များ(ဘာသာရေး)အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးလှဝင်း၊ သနန္တရဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာလှထွန်း တို့မှာ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါရှိကာ Myanmar Egress မှ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်မှာ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတို့အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ လုံခြုံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ကော်မရှင်အနေဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ အရောက် တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံတင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။
Dr. U Aye Maung discussed about his party's concerns and present conditions.
U Ba Shein discussed his party's views and requested for the precise guidance from this meeting for further action.
U Tun Aung Kyaw discussed about the riots in front of the Sittwe Police Station (1) on 3.8.12 and the 'illegally' detained three of their Township executive councilors.
Chairman U Tin Aye (National Election Commission) talk about the need to cooperate between National Government leaders and Rakhine Nationals leaders for the Rule of Law and for the National Peace. But he do not elaborate the facts discussed by Lieutenant General Hla Min about the involvement of the Rakhine National Development Party leaders in the Rakhine conflict but simply warned them, "To stop doing those and if continue to do, (government) need to take stern action."
11. On 9.8.2012 full details of all the above discussions were presented to National Parliamentarians at the Naypyitaw Municipal guest house. In accordance with the dignity of the National Development Party, the Central Executive Committee members agree, promise, and hereby undersigned the National Election Commission's proposal to cooperate with the responsible administrators and government leaders to get the Rule of Law and Peace and security in the Rakhine State, Rakhine.
I got the above secret document, authenticity of which could not verify yet, of the Rakhine National Development Party's record of meetings with the Myanmar Government authorities. Because of the uncertainty of the source and authenticity I just published the milder vague statement earlier. Could any one of your friends or contacts verify the signatures? If could prove or verify the authenticity of signatures, we could callacheckmate.
Hmuu Zaw is also guilty with the spreading the false news of fully armed Bengali illegal invasion even with Rocket Launchers, wrongly painting the issue as "Threatening the National Security", which effectively incite hatred on Rohingyas and flamed the unnecessary 'Ultra-Nationalist Spirit', and effectively "Forcing all the Myanmar citizens" to stand against Bengalis, Rohingyas and then later extended to all the Myanmar Muslims.
The doctrine of "command responsibility" was established by the Hague Conventions IV (1907) and X (1907) and applied for the first time by the German Supreme Court in Leipzig after World War I, in the 1921 trial of Emil Muller.
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ——————ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း တင်ပြသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ၏ ရခိုင်အရေးအခင်းအပေါ် ပါဝင် ပတ်သက်မှုကို အကျယ် ဆွေးနွေးခြင်း မရှိဘဲ "ဆက်မလုပ်ကြရန် လုပ်ရင်တော့ အရေးယူမည်" ဟု ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း မှတ်တမ်းတွင် ရေးသား ထားခဲ့သည်။
ဤသတင်းများ လှိုင်လှိုင်ကြီးထွက်ပေါ်နေသည့် အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရခိုင်တိုင်းရင်း သားများ တိုးတက်ရေးပါတီအား အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး "ဆက်မလုပ်ကြရန် လုပ်ရင်တော့ အရေးယူမည်" ဟု သတိပေးခံလိုက်ရခြင်းမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုး တက်ရေးပါတီ၏ နိုင်ငံရေး ဂုဏ်သိက္ခာကို များစွာ ထိခိုက်ပါ သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ရာ၌ အဓိက ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား များ တိုးတက်ရေးပါတီ ဖြစ်သည် ဟု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အတိအကျ စွပ်စွဲလိုက်သည့် သဘောဆောင်သည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းသည် စစ်မှန်သည်ဆိုပါက ပေါ့ပေါ့မထားသင့်ပါ။ ရခိုင်သမိုင်းတခု၏ အစိပ်အပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။
မစစ် မှန်သော မှတ်တမ်းဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းဘို့ လိုပါ မည်။ စစ်မှန်သော မှတ်တမ်းဖြစ်သော်လည်း "ဆက်မလုပ်ကြရန် လုပ်ရင်တော့ အရေးယူမည်" ဟု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သတိပေးခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အဓိကရုဏ်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော သတ်ဖြတ်၊ မီးရှို့မှုကြီးများနှင့် လုံးဝ ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အခြား မည်သည့်ကိစ္စရပ်အတွက် ကော်မရှင်က ခေါ်ယူ သတိပေးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီအနေဖြင့် လူထုတရပ်လုံးအားခြေခြေမြစ်မြစ် ရှင်းပြဘို့ လိုပါမည်။
Posted: 17 Aug 2012 03:13 AM PDT
Thanks to Angela who sent me the following tips. It is most timely for of late I have been experiencing knee problems after I dida20 minute brisk workout on the Step Machine last week. Thankfully,afriend returned from Melbourneafew days earlier to attend her son's graduation and gave me emu oil, emu ointment and emu cream - for my knee and joint pains. I just have to accept the fact that I am no longer young even if I am still young at heart. Try this workout and may all who need knee maintenance experience benefits from the exercise. I have edited it briefly as I suspect it wasaGoogle translation or something along those lines.
After you have reachedacertain age, it is common that you start to feel pain, less flexible or some kind of cracking noise on your knees. All you need is 10 minutes of your time daily to keep your knees healthy.
In fact, problems may surface when you are suddenly 'aware' of certain parts of your body. This did not happen by chance or coincidence, unfortunately. You can think back of the time when you were young. Did you ever have backache or pain in the neck? Did you feel pain in your shoulders or elbows? Did you ever experience weakness on your limbs? Your answers are probably "no".
Why do you have these feelings? Basically, it is because the blood flow (and chi flow along the meridians) in your body is either no longer fluent or encounters some kind of blockage. The effect is similar to the blockage of underground sewage due to lack of maintenance.
Therefore, it is important to maintainahealthy system for smooth blood flow and chi flow.
To maintain your knees healthy, all you need is 10 minutes of timeaday to do the following exercises:
1. Slap or massage the outer edge of the knees; (2 min.)
2. Slap or massage the inner edge of the knees; (2 min.)
3. Slap or massage the back (concave part) of the knees; (2 min.)
4. Slap or massage the knee caps (2 min.)
5. Kneel down to "walk" on your knees (2 min.)
Do this everyday before any exercise. If you cannot "walk" on your knees, you can slap or massage the back of your knees instead. Elders should not run. Instead, walk briskly. Running can hurt your knees further. If you ever go hiking, when walking downhill, you must put your weight evenly on the bottom of your feet. Never put weight on toes only as that can lead to knee injury.
It's better to lose our pride to the one we love, than to lose the one we love because of pride.
Posted: 17 Aug 2012 02:33 AM PDT
Tanda Putra' merupakan filem yang dipergunakan oleh BN lebih-lebih lagi UMNO untuk 'discredit' Lim Kit Siang dan ini merupakan tindakan 'desperate' pihak BN dalam menunggu pilihanraya yang paling mencabar dalam sejarah negara ini.
Isu perkauman dan agama diperbesarkan oleh pihak UMNO kerana itu sahaja yang mereka rasakan boleh menyekat peningkatan pengaruh DAP dalam kancah politik tanahair. DAP sudah di terima oleh sebahagian orang Melayu sebagai parti yang mampu membawa kebaikan kepada negara bersama-sama dengan PAS dan PKR.
Tohmahan dan tuduhan palsu ke atas LKS itu merupakan jalan yang terakhir untuk BN mengelakan diri dari terjatuh tersungkur di hadapan mata rakyat kerana momokan terhadap parti itu sejak lebih empat dekad lalu sudah secara deras tidak diterima lagi oleh ramai orang Melayu. UMNO dalam kedudukan 'desperate' untuk mendapatkan sokongan orang Melayu kerana sebahagian besar dari orang Melayu sudah menerima PAS sebagai parti gantian kepada UMNO untuk mereka sekarang ini.
Kaum Cina pula sudah meninggalkan MCA yang selama ini merupakan parti yang mewakili bangsa Cina dalam Perikatan dan BN selepas itu. Maka memainkan isu perkauman itu merupakan salah satu dari strategi untuk mengelakan orang Melayu dari memberikan perhatian terhadap DAP. Dalam posting saya semalam saya telah menulis tentang betapa 'desperate'nya UMNO jika PAS dan DAP terus-terusan bekerjasama dengan baik kerana jika kedua-dua parti ini tidak dapat dipecah belahkan oleh UMNO maka keputusan pilihanraya yang akan datang ini adalah 'predictable'.
Datin Paduka Shuhaimi Baba, pengarah filem itu menafikan yang filem itu membawa maksud untuk menuduh LKS terlibat memyebabkan tercetusnya trajedi 13 Mei '69 itu. Saya mempunyai andaian yang isu ini dengan sengaja dipermainkan kerana politik dan kuasa. Ramai yang bercakap dan menghubungi saya berpendapat ini merupakan permainan politik yang sangat kotor dan LKS sepatutnya mengambil tindakan Mahkamah jika cukup kesahihan yang isu ini diperbesarkan semata-mata kerana permainan politik desperado pihak yang ketagih dengan kuasa itu.
Kita sudah merdeka selama 55 tahun dan isu perkauman ini nampaknya di burukkan oleh pihak parti-parti yang memerintah. Sekarang ini, rakyat pula yang bersabar dengan tindak tanduk BN untuk mengelakan pergaduhan di antara kaum di negara ini. Tindakan media massa dan alternatif yang memihak kepada BN sengaja mahu mengingatkan peristiwa berdarah itu untuk menakut-nakutkan orang Melayu dan untuk menyemai perasaan benci-membenci di antara kaum.
Kita memperjuangkan kehidupan rakyat yang muhibbah dan harmonis kerana sejak merdeka kita mempunyai satu matlamat yang 'ultimate', iaitu penyatuan semua kaum dan mencapai tahap 'national unity' yang optima.
Itulah sebaik-baik peninggalan untuk generasi kita yang akan datang. -aspanalian.net
Posted: 17 Aug 2012 12:12 AM PDT
It only makes sense that because hair grows out of your scalp, nurturing your scalp is an essential part of hair care. The scalp must be nurtured to createahair growing environment. Nevertheless, you would be surprised how many hair treatment experts miss that point.So-called "experts" will advise you to saturate your scalp in harsh chemicals hoping to somehow fertilize
Do you get fatter in the cold weather? It'sagood question right now, considering that this year's farmer's almanac is predictingafrigid winter. It's FREEZING here in New Jersey and we just got dumped with3feet of snow! Some of my friends up in the great white yonder think that temps in the 20's are balmy. Yeah right. With the wind chill, even my bones had goose
Can you really make thousands of dollars every month processing data entry from home? Avoid data entry scams. These home typing scams are represented as filling out forms, data entry typing jobs, data entry jobs, data entry typing business opportunities, or freelance data entry jobs. Here's what they promise you: Chooseaproduct provided in their database, type a
You have noticed your hair is thinning. Maybe you have been noticing it forawhile, maybe the hair fall only just started. No matter when, you probably only have one thing on your mind: How do you stop hair loss?While there really is no simple answer to that question, there are some simple steps you can take to help save your hair. Hair loss is the result of hormone
Proper eating starts with getting the right foods in your kitchen and the bad foods out. I treat my kitchen likeamini laboratory,aplace that provides me with all the fuel I need to maintain hardcore intensity in life and training! Below are my 13 essentials for fueling your muscle building journey. 1) Do your shopping onafull stomach. Shopping when you are hungry
You might not recognize the name, but you may be familiar with the effects of Central Nervous System (CNS) Fatigue. The symptoms of CNS Fatigue can include lack of motivation, poor mood, impaired cognitive ability and abnormally high perceptions in regards to the force of exertion-that is, we think we're working outalot harder than we actually are. These are